वीर्य विश्लेषण कसरी लिने? के परिणाम हुन सक्छ र कसरी सुधार गर्न?
को विवाहित दम्पतीको 50% मा किनभने पुरुष बाँझोपन एक बच्चा हुन सक्दैन। सर्वेक्षण साधारण आशङ्का बाँझोपन लागि वीर्य सुरु। तर, यो गर्भावस्था योजना बनाउँदा, वितरण लागि सिफारिस परीक्षण सूचीमा समावेश गरिएको छ। यो गर्न धेरै मनमोहक छ, र गर्भपतन को मामला मा, विशेष गरी पटक-पटक।
बोल पडना, रुचि, गुणस्तर अन्वेषण गर्न निर्णय गर्ने जोडे कसरी वीर्य विश्लेषण पारित गर्न सही छ। परिणाम मान्य हुन, तपाईं निम्न आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ:
abstinence आदर्श5दिन हुनुपर्छ;
रक्सी, धूम्रपान, ड्रग्स, औषधि बहिष्कार गर्नुपर्छ;
को सौना, स्टीम कोठा पहुँच कुनै;
रहन सुन्दर र supercool;
तातो र मसालेदार खाना हटाउनु।
एक अध्ययन वीर्य को परिणाम केही घण्टा भित्र तयार हुन सक्छ, छिटो पर्याप्त बाहिर। विश्लेषण प्रयोगशाला मा लिन राम्रो छ, तर एक विशेष स्टेराइल जार मा घर मा बोल पडना सङ्कलन गर्न अनुमति दिएको छ। जबकि शरीर तापमान कायम राख्न अनुसन्धान को लागि जहाज सामाग्री एक घण्टा लागि आवश्यक छ।
यी सामान्य सिफारिसहरू, स्पष्ट निर्देशन हो कसरी वीर्य विश्लेषण पारित गर्न चयन प्रयोगशाला को उरोलोजस्त दिन वा शीघ्र हुनेछ। बोल पडना एक कंडोम बिना हस्तमैथुन संकलित गर्नुपर्छ।
अध्ययन दौरान, आन्दोलन, आकृति र spermatozoa को संरचना, साथै आफ्नो एकाग्रता अध्ययन। कार्य - आदर्श देखि विचलन को मुख्य सूचकहरू पहिचान गर्न। तिनीहरूले वीर्य फलस्वरूप संकेत गर्दै:
चिपचिपाहट (2 सेमी);
Motility (25% सक्रिय सरलरेखीय गति र अव्यवस्थित संग शुक्राणु);
मात्रा (2 एमएल);
एकाग्रता (एमएल मा 20 देखि मिल हुनुपर्छ।);
सामान्य फारम (14 भन्दा बढी%)।
मा कोष्ठक मान्यता संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। परिणाम धेरै राम्रो थियो भने निराश छैन। यो दुई हप्तामा फेरि बोल पडना फेरि कब्जामा लिनु यो मामला मा सिफारिस गरिएको छ, र त्यसपछि मात्र कुनै पनि निष्कर्ष बनाउन।
विभिन्न कारक शुक्राणु गुणस्तर असर गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, अध्ययन अघि 10 दिन फ्लू हस्तान्तरण। मानिसहरू धेरै राम्रो परिणाम, को वीर्य विश्लेषण कसरी सुधार गर्न बारेमा सामान्यतया चिन्तित प्राप्त हुनेछ, र दबाइ बिना यो सम्भव बनाउन चाहे। बोल पडना गुणस्तर तनाव, थकान, निद्रा कमी, विकिरण गर्न जोखिम, अत्यधिक व्यायाम असर गर्छ।
त्यसैले, भोजन, काम र बाँकी को normalization राम्रो परिणाम दिन्छ। यसबाहेक, यो खराब बानी, व्यायाम परित्याग गर्नुपर्छ, पत्र वजन, उपचार सुनिंनु।
तर, यो सबै समस्या को प्रकार र हदसम्म निर्भर गर्दछ। थप अध्ययन बारम्बार अनियमितताहरु र गम्भीर उपचार को कारण निर्धारण गर्न आवश्यक छ। निराश पनि गम्भीर अवस्थामा, किनभने आधुनिक चिकित्सा मदत गर्न सक्छ, के।
केही मानिसहरू आफ्नो बोल पडना अन्वेषण गर्न आवश्यकता एकदम संवेदनशील छन्। तिनीहरूले वीर्य विश्लेषण, को पाठ्यक्रम, पारित गर्न र सम्भव खराब परिणाम कसरी चिन्तित छन्। अनुभव केही छैन सामाग्री पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले मायालु पत्नी को समर्थन धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
वीर्य एक सम्भव परिणाम:
सामान्य मानहरू (normospermia);
कम एकाग्रता (oligozoospermia);
सामान्य motility (asthenozoospermia) तल;
आवश्यकताहरु (theratozoospermia) पूरा गर्दैन फारम;
धेरै leukocytes (leucocytospermia);
शुक्राणु (azoospermia), आफ्नो immobility (akinospermiya), आफ्नो सानो मात्रा (kriprospermiya) को अभाव;
सानो बोल पडना (oligospermia), यसको पूर्ण अभाव (spermatoschesis);
रगत को उपस्थिति (gemospermiya);
कुनै प्रत्यक्ष शुक्राणु (nekrospermiya)।
तसर्थ, वीर्य विश्लेषण कसरी पारित गर्न, चयन गरिएको प्रयोगशाला र उपस्थित चिकित्सक मा स्पष्ट हुनुपर्छ। विश्वसनीय परिणाम प्राप्त गर्न, तपाईं सबै आवश्यकताहरु पूरा गर्नुपर्छ। मा खराब परिणाम को रसिद दुई भन्दा बढी सप्ताह को एक अन्तराल फेरि बोल पडना फर्के गर्नुपर्छ।
Cortisol, महिला को दर
द्वैध स्क्यानिङ जहाजहरु
पखाला घर कसरी निको पार्न गर्न। निदान र उपचार
Mantoux परीक्षण: नमूना परिणाम फरक व्याख्याहरु
Contractions: तिनीहरूले के हुन्?
मद्दत लागि चमत्कार-काम प्रार्थना संरक्षकको दूत
कसरी डोरी मा छलछामको गाँठो बाँध गर्न? सबैभन्दा विश्वसनीय एकाइहरु